घटना र विचार, न्युज डेस्क !5months ago November 2, 2019
मनोरञ्जन लिने अभिप्रायले आफूले खर्चेको रकमको पुरापूर सदुपयोग भयो भने त्योभन्दा आनन्दको समय कुन होला ? सिड्नीवासी नेपाली चलचित्रप्रेमीहरूलाई यो जिज्ञासा राख्दा जवाफ आउने गर्छ– चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ हेरेको बेला ।
साँच्चै यो चलचित्रले पूरै अष्ट्रेलियामा आफ्नो उपस्थिति दह्रो नै बनायो । सिड्नीमा रहेका नेपाली दर्शक त यो चलचित्र हेर्नका लागि आफ्नो काम नै छाडेर सिनेमा हलतिर लागे, जसको मन–मष्तिष्कमा यसले अत्यन्त गहिरो प्रभाव पारेको पाइयो ।
‘यति राम्रो चलचित्र हेर्न पाउँदा मन नै फुरुङ्ग भएको छ । त्यसमाथि यो चलचित्रलाई सात समुन्द्रपारि ल्याएर हामी प्रवासिएका नेपालीमाथि आयोजकले गुन लगाउनुभएको छ’– चलचित्र हेरिसकेपछि सिड्नीका पंकज गर्तौलाको प्रतिक्रिया थियो ।
यसअघि पनि कमेरो इभेन्ट र रगडेल ब्वायजले छक्का पन्जा–३ चलचित्रको सफलताका साथ प्रदर्शन गर्नुका साथै विभिन्न इभेन्ट्सको आयोजना गर्दै आइरहेको छ । कमेरो इभेन्ट्सका सुरज सुवेदीका अनुसार यो चलचित्रको शुक्रबारसम्म सिड्नीमा मात्र ७ शो भयो भने शनिबार, आइतबार र सोमबार अन्य थप शोहरू हुँदैछ ।
यस्तै, अन्य शो पनि थपिने क्रममा रहेको बुझिएको छ । सिड्नी बाहेक अष्ट्रेलियाका अन्य शहरमा भने यो चलचित्रको १९ शो भैसकेको छ । ‘विदेशमा चलचित्र ल्याएर दाम होइन मन कमाउन खोजेको हौँ हामीले, प्रवासिनुभएका नेपालीजनलाई चलचित्रमार्फत नेपालसँग जोड्नु र यहाँ हुर्कंदै गरेको दोस्रो पुस्तासमक्ष चलचित्रको माध्यमबाट नेपाली भाषा पुर्याउनु पनि हाम्रो उद्देश्य हो’, रगडेल ब्वायजको भनाई छ ।
नेपालमा पनि मन र धन दुबै कमाउंन सफल भएको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’मा निर्देशक दीपेन्द्र लामाले देखाएको निर्देशकीय क्षमता अनि त्यसलाई वजनदार तरिकाले पर्दामा प्रस्तुत गर्न कलाकारहरूले कुनै कसर बाँकी नराखेको यथार्थको खुलेर तारिफ गर्नैपर्छ ।